चिसो मौसममा दही : के भन्छ आयुर्वेद ? के भन्छ आधुनिक विज्ञान ? – Health Post Nepal
चिसो मौसममा दही : के भन्छ आयुर्वेद ? के भन्छ आधुनिक विज्ञान ?
२०७६ मंसिर १९ गते ११:११
चिसो मौसममा दहीसेवनलाई लिएर मानिसको दिमागमा अनेकथरी सवाल उब्जिन्छन् । तपाईं पनि जाडो बढेसँगै दही खाने विषयमा द्विविधामा हुनुहुन्छ होला । यहाँ दहीबारे तपाईंको मनका सबैखाले जिज्ञासालाई आयुर्वेद र आधुनिक विज्ञानका दृष्टिले समाधान दिने कोसिस गरिनेछ ।
जाडो मौसमको एक महत्त्वपूर्ण पक्ष स्वादिष्ट भोजन हो । चिसो मौसममा सबैखाले व्यञ्जनको आनन्द लिनुका साथै आफ्नो शरीरलाई घट्दो तापमानबाट जोगाएर राख्नु महत्त्वपूर्ण छ । किनकि, केही खाद्यपदार्थ यस्ता छन् जो खासगरी गर्मी मौसमका लागि बनेका छन् । यदि तपाईं त्यस्ता खाद्यवस्तुको सेवन चिसो मौसममा गर्नुहुन्छ भने केही सावधानी अपनाउनु जरुरी हुन्छ । यहाँ अधिकतर मानिसको रोजाइको आहार दहीको बारेमा चर्चा गरिनेछ ।
आमरूपमा मानिन्छ कि, चिसो मौसममा दहीसेवनबाट बच्नुपर्छ, किनकि यसको सेवनले सर्दी वा घाँटीको समस्या हुन सक्छ । के यो सत्य हो ?
दही राम्रा ब्याक्टेरिया, भिटामिन, प्रोटिन, म्याग्नेसियम, क्याल्सियम र पोटासियमले भरपूर हुन्छ । त्यसो भए हामी दहीबाट किन बच्ने ? चिसो मौसममा दही खानुपर्छ वा यसबाट बच्नुपर्छ भन्नेबारे आयुर्वेद र आधुनिक विज्ञानका दृष्टिले निर्क्योल निकालौँ ।
दहीबारे के भन्छ आयुर्वेद ?
विश्वको प्राचीनतम र भरपर्दो उपचार पद्धति आयुर्वेदका अनुसार चिसो मौसममा दहीबाट बच्नुपर्छ, किनकि यसको सेवनले ग्रन्थि निष्कासन (म्युकस सेक्रेसन) बढाउँछ । दही प्रकृतिमा कफको कारक हो, जसका कारण यसको सेवन त्यस्ता व्यक्तिका लागि जोखिमपूर्ण हुन्छ जसलाई दम, खोकी, श्वासप्रश्वास तथा चिसोसम्बन्धी अन्य समस्या हुन्छन् । आयुर्वेदले खासगरी चिसो मौसममा र रातको समयमा दहीबाट बच्न सल्लाह दिन्छ । ‘नक्तं दधि न भुञ्जीत अर्थात् रातिमा दही नखानू’ यो उक्ति निकै प्रसिद्ध छ ।
दहीबारे के भन्छ आधुनिक विज्ञान ?
दहीमा निकै स्वस्थकर ब्याक्टेरिया पाइन्छ जुन तपाईंको आँतका लागि लाभदायक हुन्छ । यो एक प्रकारको ‘फर्मेटेड फुड’ हो जसले सेवनकर्ताको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई मजबुत बनाउँछ । दही क्याल्सियम, भिटामिन बी१२ र फोस्फोरसको खानी हो । चिसो मौसममा दहीको सेवनले तपाईंको समग्र स्वास्थ्यलाई राम्रो बनाउँछ । यद्यपि, श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या भएका बिरामीले भने साँझ ५ बजेभन्दा पछि दहीको सेवनबाट बच्नुपर्छ, किनकि यसले एलर्जी र दमपीडितमा ग्रन्थिनिष्कासनको समस्या पैदा गर्न सक्छ ।
आधुनिक विज्ञानका अनुसार दही भिटामिन सीले भरिपूर्ण हुन्छ जसले चिसोपीडित व्यक्तिका लागि निकै फाइदाजनक हुन्छ । तर, तपाईंले घरको तापमानमा भने ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ । दहीलाई जमाएपश्चात् फ्रिजमा राख्नुहुँदैन ।
आयुर्वेद र आधुनिक विज्ञानको दहीबारेको दृष्टिकोण, अध्ययन–अनुसन्धानको निष्कर्षलाई केलाउँदा भन्न सकिन्छ कि– चिसो मौसममा तपाईंले आफ्नो रोजाइको कचौराभरिको दही खानु जरुरी छैन । चिसो मौसममा दहीको सेवन सीमित गर्न सक्नुहुन्छ । विशेषगरी, जब चिसो र फ्लुले पीडित हुनुहुन्छ, त्यतिवेला दहीको सेवन सीमित मात्रामा मात्र गर्नुहोस् । यसका साथै आफ्नो कोठाको तापक्रम सन्तुलनमा पनि विशेष ध्यान दिनुहोस् ।